11ka gins ee ugufiican dhamaan dhadhanka, kee doorbidayaa? | Ragga Stylish
Kalidaa ama lagu daro cabitaanada kale, ginku had iyo jeer waa moodada adduunka. Isbaanishku wuxuu ku yaalay wadanka sadexaad ee ugu isticmaalka badan; Filibiin iyo Mareykanka ayaa gacanta sare leh. England waxay sii ahaaneysaa isha asalka ah ee ugu wanaagsan adduunka.
1 Waa maxay gin?
2 Dhadhaminta qoraallada liin dhanaanta wanaagsan
3 Kuwani waa kuwa ugu fiican
3.1 williams ceyrsada
3.6 JJ Whitley London Gry Gin
4 Gin Isbaanish
Waa maxay gin?
Gin wuxuu asal ahaan ka yimid Netherlands qarnigii XNUMXaad, mana uusan joojin inuu isbeddelo. Waa cabitaan dhaqan ahaan laga helo kala-baxa shaciir aan fiicnayn ama iniinleyda galleyda ah. Si kastaba ha noqotee, hal-abuurayaal badan ayaa hadda ka sameeya tufaax iyo baradhada baradhada.
Waxay kuxirantahay qaabka soo saaraha, waxaa lagu carfiyey berry juniper, cardamom, iyo geedo kala duwan ama miraha.. Qalin-jabinta aalkolada waxay ku dhowdahay 40º; ficil ahaan inta badan kali lama cabo. Waqtigan xaadirka ah waxaa loo isticmaalaa sida ugu badan saldhigga is biirsaday, kaas oo lagu daro siyaabo aad u kala duwan. Gintonic, tusaale ahaan, waa nooc ka mid ah kuwa la isku daray.
Dhadhaminta qoraallada liin dhanaanta wanaagsan
Qasab ma aha isku mid. Waxay ku kala duwan yihiin hababka wax soo saarkooda, gaar ahaan geedaha iyo miraha ka dhiga iyaga iyo waqtiyada halsano. Qiyamyadan ayaa go'aamin doona in hidduhu noqon karo dhir badan, oo leh taabasho ubax leh ama xooga lasaarayo liinta.
Si aad u dhadhamiso gin Waxaa la soo jeediyay in lagu tijaabiyo heerkul u dhexeeya 21-23 darajo Celsius. Muraayadda qalooca ayaa kuu oggolaaneysa inaad ku raaxeysato miraha, ubaxa, liinta iyo udgoonka had iyo jeer. Kuwani waa qoraalo sidoo kale lagu qabtay dhadhankiisa; Afku waa siman yahay oo wuu ku raaxaystaa. Noolaha botanical-ka ee loo adeegsaday diyaarintiisa waxay hubaal saameyn gaar ah ku yeelan doontaa dhadhanka.
Kuwani waa kuwa ugu fiican
Gini kastaa wuxuu leeyahay shakhsiyad u gaar ah, taas oo ka dhigaysa mid gaar ah oo gaar ah. Warshadaha ugu caansan waxay ogyihiin inay u baahan yihiin inay kudarsadaan taabasho ka duwan guntooda haday rabaan inay banaanka ka istaagto. Maxay yihiin jinsiyadaha loo tixgelinayo inay yihiin Premium adduunka?
Inta lagu guda jiro geedi socodka wax soo saarka labada sano ah, ginni waa la sifeeyey in ka badan boqol jeer. Saldhiggu waa halsano tufaax iyo baradho ah, oo lagu murugooday Yacquub. Maaddooyinka dhirta ayaa markaa lagu daraa, kuwaas oo ka mid ah kuwa la qadariyo qorfe, lowska, sinjibiil, yicib, qaley, kaaryam, toon, iyo liin dhanaan
Waxaa lagu gartaa dhadhanka jilicsan ee dhaqanka, kaas oo ku dhex jira tufaax iyo iswaafajinta noocyada, dhirta iyo liinta.
Iibso - Geneva Williams Chase
Waxay caan ku tahay baararka is biirsaday. Juniper, abuurka koryander, licorice iyo xididka 'Angelica root' ayaa lagu dhex daray salka muuska. Kala-saaridda waxaa lagu fuliyaa qaabab dhaqameed, taas oo nuxurkeeda ka dhigaysa mid aan isbeddelin.
Markaad cabayso wuxuu muujiyaa jilicsanaanta qiiqa leh dabeecad qallalan, Waxay ku jirtaa taabashada udgoon ee dhir udgoon iyo xawaash.
Iibso - Tanqueray London Gry Gin
Waxaa loo aqoonsan yahay "jiridda qajaarka". Si sax ah, qajaar waa qayb aasaasi u ah soo saarideeda.
Juniper, koryander, diirka liinta, Bulgarian ubaxyada ubaxyada, iyo, dabcan, jilaayaasheeda qajaar, ayaa ah waxyaabaha ugu badan. Muuqaal ahaan waxaa si fudud ku garan kara dhalo u eg weel farmashiye duug ah.
Iibso - Hendrick 'Gin
Ilaa iyo inta qabowgu jiro, waxaa jiri doona Oxley, ”ayay yiraahdeen soosaarayaasheeda. Si sax ah qabow waa aasaaska habka wax soo saarka. Halkii laga heli lahaa nidaamyada kala-saaridda kuleylka ee caadiga ah, Oxley waxay isticmaashaa qabow. Waxay u baahan tahay heer-kul ah shan darajo oo ka hooseeya eber.
Natiijada? Gininka loo yaqaan 'crystalline gin', oo leh dhadhan aad u daran oo si nabadgelyo leh isugu daraya kow iyo tobanka dhirta dhirta ee qeexaya. Dhirta iyo liinta, jawiga noocyada, waa gin heer sare ah, oo daabacaado xaddidan leh.
Iibso - Gin oxley
Gali sheeko cusub adduunka gin. Isticmaal abuurka poppy iyo isha masduulaaga, oo waxay siisaa ikhtiyaar ka duwan kuwa jecel gin.
Soosaarayaasheeda ayaa diyaariyey dhalo aad u miyir qaba, oo midabkiisu yahay cawl dhuxul; muuqaal ahaan waxay leedahay qoor u eg qoorta sida caadiga ah nooc ka mid ah canine Ingiriisiga oo cabbitaanka u bixiya magaceeda.
Iibso - Bulldog
JJ Whitley London Gry Gin
Waa gin jilicsan. Waxay qeexday aromada iyo dhadhanka dhirta, violets Parma iyo liinta. Dabeecadiisa xoogaa qalalan waxay kubiirtaa dhadhanka sideeda botanicals ee iskudhisay si ay u siiso shaqsiyad gaar ah.
Liisaska badankood ee 'Premium gins' waxaa ka mid ah kuwa horey u soo shaac baxay: Black Death Gin, Gin Brecon Specia Edition, Boë Premiun Scottish Gin, Whitley Neill, Bluecoat Organic Dhammaan cabitaannada tayada wanaagsan iyo aqoonsiga adduunka oo idil.
Isbaanishku wuxuu si guul leh ku soo galay warshadaha gin. Jinsiyadaha Isbaanishka ugu caansan uguna isticmaalka badan?
Waxaa loo yaqaana "giniga Barcelona". Waa jir aad u macaan; Waxay leedahay dhadhan dabeecad goboleedkan iyada oo kuxiran botanicals-ka sameeya. Rosemary, fennel, berde, canab, iyo caleemaha geedaha waa qoraalada taagan.
Iibso - BCN Gin
Waxaa lagu sameeyaa dhareer ka mid ah miraha hadhuudhka oo lagu miiro juuniper, koryander, xididka 'Angelica root', ubax, kaduud iyo liin diir ah. Waa mid cusub oo fudud oo isle'eg; Markaad cabto, liinta iyo taabashada macaan ayaa la arkaa.
Muuqaalka ugu wanaagsan ee sharraxaaddiisu waa biyaha asalka ah ee laga helo ilaha fulkaanaha ee ku dhaca dhagxaanta. Tani waxay ka dhigeysaa inay aad hodan ugu tahay macdanta, kaas oo, oo ay weheliyaan xabbo, kaaraam, xididaa Angelica iyo licorice, ay siiyaan shakhsiyad aad u gaar ah.
Waa jinni Galician ah, oo lagu garto qaabkiisa caadiga ah kaas oo geedku u taagan yahay qoraalka ugu weyn. Waxay leedahay caraf udgoon iyo dhadhanka liinta iyo tilmaamo macaan.
Waxay ka dhalataa isku darka xiisaha leh ee botanicals-ka badda Mediterranean; Tani waa kiiska liinta, kedarka iyo laurel, oo leh qalaad kale, sida lime, kaffir, koryander. Waxaa loo arkaa inay tahay "Gastronomic gin", maaddaama geeddi-socodka sharraxaaddiisu ay adeegsanayso mabaadi'da cunnada adag.
Waxay sidoo kale ku leeyihiin suuq xoog leh tayada Gin Meigas Fóra, Ana London Dry Gin, Sikkim Fraise, Ginbraltar, Port of Dragons, iyo kuwo kale.
Iibso - ginraw
Kalidaa ama Gintonic-ka dhaqameed, ginku waqti ma leh oo had iyo jeer wuxuu kujiraa garaacista baarka kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Jinsiyadaha ugu fiican
Xul wanaagsan, laakiin Bombay Shappire-ka caadiga ah ayaa maqan, taas oo ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna qiimaha badan adduunka.
Aad ayey u wanaagsan tahay in lagu daro qayb ka mid ah ginsiyadaha Isbaanishka, taas oo inkasta oo ayan haysan aqoonsi caalami ah oo isku mid ah, in yar oo ka mid ah ayaan horeyba u haysannaa kuwo badan noocyada jinka kuwaas oo ka dhigaya niche ka mid ah faa'iidooyinka ugu fiican, sida BCN Gin.
Waxaan kugula talinayaa inaad ku darto Gin Mare, oo helaya aqoonsi caalami ah oo aad u weyn.
Boorsooyinka garabka ragga